Bit By Bit - အပြေးစမ်းသပ်ချက် - 4.5.1.1 အသုံးပြုမှုလက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်မှာ
Logistics, ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်လုပ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်မှု run ဖို့သင် enable လုပ်ထားခြင်း, ရှိပြီးသားပတ်ဝန်းကျင်၏ထိပ်ပေါ်တွင်သင်၏စမ်းသပ်မှုမွမ်းမံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သလိုအကြီးစားမှာ run နိုင်ပါတယ်နှင့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူလက်တွဲမလိုအပ်ပါဘူး။
ဥပမာအားဖြင့်, ဂျနီဖာ Doleac နဲ့လုကာ Stein (2013) လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုတိုင်းတာသည့်စမ်းသပ်မှု run ဖို့အွန်လိုင်းမှဈေး (ဥပမာ, Craigslist) ၏အားသာချက်ကိုယူ။ Doleac နှင့် Stein iPod ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကြော်ငြာနှင့်စနစ်တကျရောင်းချသူ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအမျိုးမျိုးအသုံးပြုပုံသူတို့ကစီးပွားရေးအရောင်းအပေါ်အပြေးပြိုင်ပွဲ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် Doleac နှင့် Stein အကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးမားအခါ (ကုသမှုသက်ရောက်မှုများ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော) ခန့်မှန်းရန်သူတို့၏စမ်းသပ်မှု၏စကေးအသုံးပြုအကျိုးသက်ရောက်မှု (ယန္တရားများ) ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, အဘယ်ကြောင့် ပတ်သက်. အချို့အတွေးအခေါ်များကိုဆက်ကပ်။
မတိုင်မီက Doleac နှင့် Stein ၏လေ့လာမှုမှစမ်းသပ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုတိုင်းတာနှစ်ခုအဓိကချဉ်းကပ်မှုရှိခဲ့သညျ။ စာပေးစာယူလေ့လာမှုများခုနှစ်တွင်သုတေသီများမတူညီတဲ့လူမျိုး၏စိတ်ကူးယဉ်လူမျိုး၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖန်တီးဥပမာ, ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားဤကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုအသုံးပြုပါ။ Bertrand နှင့် Mullainathan ရဲ့ (2004) ကိုအမှတ်ရစရာခေါင်းစဉ်နှင့်အတူစက္ကူ "အမ်မလီနှင့် Greg Lakisha နှင့် Jamal သန်းပိုလုပ်ငန်းခွင်ပါသလား? အလုပ်သမားစျေးကွက်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု "ပေါ်တွင်တစ်ဦးကကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခုစာပေးစာယူလေ့လာမှုတစ်ခုအံ့သြဖွယ်ပုံဥပမာဖြစ်ပါတယ်။ စာပေးစာယူလေ့လာမှုများပုံမှန်လေ့လာမှုမှာလေ့လာတွေ့ရှိချက်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏စုဆောင်းဖို့တစ်ခုတည်းသုတေသီနိုင်ပါတယ်သောလေ့လာရေးနှုန်းအတော်လေးနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ရှိသည်။ နာမည်တွေအလားအလာလျှောက်ထား၏မျိုးနွယ်များအပြင်အများအပြားအမှုအရာအချက်ပြရှိသောကြောင့်, လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုစာပေးစာယူလေ့လာမှုများမေးခွန်းထုတ်ကြပြီ။ ဒါကဒီလို Greg, အမ်မလီ, Lakisha နှင့် Jamal အဖြစ်အမည်များကိုယှဉ်ပြိုင်ဖို့အပြင်လူမှုရေးအတန်းအစားအချက်ပြစေခြင်းငှါဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် Greg နှင့် Jamal ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်များအတွက်ကုသမှုမဆိုခြားနားချက်ကြောင့်လျှောက်ထား၏ထက်ပိုမိုယူဆမျိုးနွယ်ကွဲပြားမှုမှဖြစ်လိမ့်မယ်။ စာရင်းစစ်လေ့လာမှုများ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အလူကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားရန်မတူညီတဲ့လူမျိုး၏ငှားရမ်းသရုပ်ဆောင်တွေပါဝငျသညျ။ စာရင်းစစ်လေ့လာမှုများလျှောက်ထားသူအပြေးပြိုင်ပွဲ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ signal ကိုပေးတောင်မှသူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်သာလေ့လာတွေ့ရှိချက်ရာပေါင်းများစွာရှိသည်သော, ဆိုလိုတာကလေ့လာရေးနှုန်းအလွန်အမင်းစျေးကြီးတယ်။
သူတို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်မှုခုနှစ်, Doleac နှင့် Stein တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုမျိုးစပ်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။ တစ်ဦးစာရင်းစစ်လေ့လာမှု၌ရှိသကဲ့သို့ (သူတို့ (ကစာပေးစာယူလေ့လာမှုမှာကဲ့သို့) လေ့လာရေး-ရရှိလာတဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အတွက်တစ်ဦးလျှင်အတော်လေးနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာဒေတာစုဆောင်းဖို့နိုငျခဲ့ကွကတညျးသူတို့ဓာတ်ပုံတွေ-ရရှိလာတဲ့မျိုးနွယ်၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ uncounfounded signal ကိုအတွက်ကို အသုံးပြု. ယှဉ်ပြိုင်အချက်ပြနိုင်ခဲ့ကြတယ် ) ။ ထို့ကြောင့်အွန်လိုင်းမှပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခါတစ်ရံမဟုတ်ရင်တည်ဆောက်ရန်ခက်ခဲဖြစ်ကြောင်းဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်သောသစ်ကိုကုသဖန်တီးရန်သုတေသီများကနိုင်ပါတယ်။
Doleac နှင့် Stein ရဲ့ iPod ကိုကြော်ငြာသုံးအဓိကရှုထောင့်တစ်လျှောက်တွင်ကွဲပြား။ ပထမဦးဆုံးသူတို့ [တက်တူးနှင့်အတူအဖြူ, အနက်, အဖြူ] (ပုံ 4.12) ကို iPod ကိုကိုင်ပြီးဓါတ်ပုံလက်တော်ဖြင့်အချက်ပြခဲ့သည့်ရောင်းသူ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကွဲပြား။ ဒုတိယအချက်မှာသူတို့ကဈေးများကိုစျေးနှုန်း [$ 90, $ 110, $ 130] ကွဲပြား။ တတိယအချက်, သူတို့ [အရည်အသွေးမြင့်နှင့်အရည်အသွေးနိမ့် (ဥပမာ, Capital အမှားအယွင်းများနှင့် spelin အမှားအယွင်းများ)] ကြော်ငြာစာသားကို၏အရည်အသွေးကွဲပြား။ ထို့ကြောင့်စာရေးသူမြို့များ (ဥပမာ, Kokomo, IN နှင့်မြောက်, NE) မှအကြီးစားမြို့များကို (ဥပမာ, New York နဲ့ Los Angeles မြို့) အထိ 300 ကျော်ဒေသခံစျေးကွက်အနှံ့ချထားခဲ့သည့်3X ကို3X ကို2ဒီဇိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်။
ပုံ 4.12: များ၏စမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုလက်စွဲ Doleac and Stein (2013) ။ iPod အွန်လိုင်းမှဈေး၌ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုတိုင်းတာရန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူရောင်းသူအားဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။
အားလုံးအခွအေနအနှံ့ပျမ်းမျှရလဒ်များအမှာတော့တက်တူးရောင်းချသူအလယ်အလတ်ရလဒ်များကိုရှိခြင်းနှင့်တကွ, အနက်ရောင်ရောင်းချသူထက်ဖြူရောင်းချသူ သာ. ကောင်း၏။ ဥပမာအားဖြင့်, အဖြူရောင်းသူထက်ပိုကမ်းလှမ်းမှုလက်ခံရရှိနှင့်အဆင့်မြင့်အပြီးသတ်ရောင်းချခြင်းစျေးနှုန်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤအပျမ်းမျှအားသက်ရောက်မှုများအပြင် Doleac နှင့် Stein သက်ရောက်မှုများ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောခန့်မှန်းပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အစောပိုင်းကသီအိုရီကနေတစျခုခန့်မှန်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုပိုပြီးယှဉ်ပြိုင်ဖြစ်ကြောင်းစျေးကွက်အတွက်လျော့နည်းလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကမ်းလှမ်းမှုများအရေအတွက်အသုံးပြုခြင်းဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်ခု proxy ကိုအဖြစ်လက်ခံရရှိခြင်း, စာရေးဆရာများအနက်ရောင်ရောင်းသူအမှန်ပင်ယှဉ်ပြိုင်မယ့်အနိမ့်ဒီဂရီနှင့်အတူစျေးကွက်များတွင်ပိုမိုဆိုးရွားကမ်းလှမ်းမှုခံယူကြဘူးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပွငျ, High-အရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးနိမ့်သောစာသားတွေနဲ့ကြော်ငြာတွေဘို့ရလဒ်များနှိုင်းယှဉ်အသုံးပြုပုံ Doleac နှင့် Stein ကကြော်ငြာအရည်အသွေးမြင့်အနက်ရောင်နှင့်မှာတော့တက်တူးရောင်းသူရင်ဆိုင်နေရတဲ့အားနည်းချက် impact ပါဘူးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြော်ငြာတွေ 300 ကျော်စျေးကွက်၌ထားကြ၏ဆိုတဲ့အချက်ကို၏အားသာချက်ယူပြီး, စာရေးဆရာအနက်ရောင်ရောင်းသူမြင့်မားရ​​ာဇဝတ်မှုနှုန်းထားများနှင့်မြင့်မားလူနေအိမ်အသားအရောင်ခွဲခြားနှင့်အတူမြို့ကြီးတွေမှာပိုပြီးချို့တဲ့ဖြစ်ကြောင်းရှာပါ။ ဤအရလဒ်များအဘယ်သူမျှမကျွန်တော်တို့ကိုအနက်ရောင်ရောင်းသူပိုဆိုးရလဒ်များခဲ့ပေမယ့်, အခြားလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များနှင့်အတူပေါင်းစပ်အခါသူတို့သည်စီးပွားရေးအရငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာအမျိုးမျိုးအတွက်လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှု၏အကြောင်းရင်းများအကြောင်းကိုသီအိုရီများအကြောင်းကြားရန်စတင်နိုင်ပါတယ်အတိအကျအဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးတိကျတဲ့နားလည်မှုကိုပေးလေ့ရှိသည်။
ရှိပြီးသားစနစ်တွေအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်လုပ်ဆောင်သွားရန်သုတေသီများများ၏စွမ်းရည်ကိုပြသနောက်ထပ်ဥပမာအား Arnout ဗန်က de Rijt နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကသုတေသနသည် (2014) အောင်မြင်မှုသော့ပေါ်မှာ။ အသက်တာ၏များစွာသောရှုထောင့်ခုနှစ်, ထင်ရသောအလားတူလူဟာအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ရလဒ်နှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်။ ဒီပုံစံဘို့တဖြစ်နိုင်သောရှင်းပြချက်အသေးစားနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကျပန်း-အားသာချက်များ, အချိန်ကျော်သုတေသီများတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာအားသာချက် ဟူ. ခေါ်နေတဲ့ process ကို-in ကို lock နှင့်ကြီးပွားနိုင်သည်။ သေးငယ်တဲ့ကနဦးအောင်မြင်မှုများ-in ကို lock သို့မဟုတ်ရှားညှိုးနွမ်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာ, ဗန်က de Rijt နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက (2014) ကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်သင်တန်းသားများအပေါ်အောင်မြင်မှုကိုအထက်တွင်လေးကွဲပြားခြားနားသောစနစ်များသို့ကြားဝင်, ပြီးတော့ဒီမတရားအောင်မြင်မှုရေရှည်သက်ရောက်မှုတိုင်းတာ။
ပိုများသောအထူးသ, ဗန်က de Rijt နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် 1) ကျပန်းအပေါ်စီမံကိန်းများကိုကိုရှေးခယျြဖို့ပိုက်ဆံကတိပြု kickstarter.com တစ်ပေမယ့ဝက်ဘ်ဆိုက်; 2) အပြုသဘောဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း rated epinions ; 3) ကျပန်းမှမျှဝေသူကိုရှေးခယျြဖို့ဆုပေး၏ ဝီကီပီးဒီးယား ; 4) တွင်ကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်အသနားခံလက်မှတ်ရေးထိုး change.org ။ သုတေသီအားလုံးလေးယောက်စနစ်များကိုဖြတ်ပြီးအလွန်ဆင်တူရလဒ်များကိုတှေ့အသီးအသီးအမှု၌, ကျပန်းတချို့အစောပိုင်းအောင်မြင်မှုပေးတော်မူခဲ့ကြကြောင်းသင်တန်းသားများကိုသူတို့၏မဟုတ်ရင်လုံးဝချွတ်စွပ်အရွယ်အစားရွယ်တူ (ပုံ 4.13) ထက်ပိုပြီးနောက်ဆက်တွဲအောင်မြင်မှုရှိသည်ဖို့သွားလေ၏။ ဒီပုံစံကိုမဆိုအထူးသဖြင့်စနစ်၏တစ်ဦးရှေးဟောင်းပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာအခွင့်အလမ်းလျော့နည်းစေသောကြောင့်တူညီတဲ့ပုံစံအများအပြားစနစ်များ၌ထငျရှားသောအချက်သည်ဤရလဒ်များ၏ပြင်ပသက်တမ်းတိုးပွားစေပါသည်။
4.13 ပုံ: လေးခုကွဲပြားခြားနားသောလူမှုရေးစနစ်များအတွက်ကျပန်း၏အကြောင်းအောင်မြင်မှုရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Arnout ဗန်က de Rijt နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက (2014) 1) ကျပန်းအပေါ်စီမံကိန်းများကိုကိုရှေးခယျြဖို့ပိုက်ဆံကတိပြု kickstarter.com တစ်ပေမယ့ဝက်ဘ်ဆိုက်; 2) အပြုသဘောဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း rated epinions ; 3) ကျပန်းမှမျှဝေသူကိုရှေးခယျြဖို့ဆုပေး၏ ဝီကီပီးဒီးယား ; 4) တွင်ကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်အသနားခံလက်မှတ်ရေးထိုး change.org ။
အတူတူ, အဲဒီနှစ်ဦးကိုဥပမာသုတေသီများကုမ္ပဏီများနှင့်မိတ်ဖက်သို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသောဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တွေတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်ကျင်းပနိုင်သည်ကိုပြသနေသည်။ ထို့ပွငျ, စားပွဲတင် 4.2 သုတေသီများကုသကယ်မနှုတ်နှင့် / သို့မဟုတ်ရလဒ်တွေကိုတိုင်းတာရန်လက်ရှိစနစ်များ၏အခြေခံအဆောက်အဦးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဖြစ်နိုင်ခြေသည်အဘယ်သို့၏အကွာအဝေးပြသသောပင်နောက်ထပ်ဥပမာပေးစွမ်းသည်။ ဤရွေ့ကားစမ်းသပ်ချက်သုတေသီများအဘို့အတော်လေးစျေးပေါဖြစ်ကြပြီးသူတို့သရုပ်မှန်၏မြင့်မားသောဘွဲ့ဆက်ကပ်။ သို့သော်ဤစမ်းသပ်ချက်သင်တန်းသားများ, ကုသ, နှင့်တိုင်းတာခံရဖို့ရလဒ်များကျော်သုတေသီများကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုကိုဆက်ကပ်။ , နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည် ဖြစ်. , ထို့ပွငျ, တစ်ဦးတည်းသာမှုစနစ်အတွက်နေရာယူပြီးစမ်းသပ်ချက်အဘို့, သုတေသီများသက်ရောက်မှု system ကို-တိကျတဲ့ဒိုင်းနမစ် (ဥပမာ, Kickstarter ကစီမံကိန်းများကိုသို့မဟုတ် change.org အသနားခံအဆင့်သောလမ်းအဆင့်သောလမ်းဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်စိုးရိမ်နေကြရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ် ) အခနျး2မှာ algorithmic ဖွငျ့ ပတ်သက်. ဆွေးနွေးမှုကိုကြည့်ပါ။ သုတေသီများအလုပ်လုပ်စနစ်များအတွက်ကြားဝင်လာသောအခါနောက်ဆုံးတွင်, လှည်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမေးခွန်းများကိုသင်တန်းသားများဖြစ်နိုင်သောအန္တရာယ်, Non-သင်တန်းသားများနှင့်စနစ်များနှင့် ပတ်သက်. ပေါ်ပေါက်လာကြသည်။ ကျနော်တို့အခန်း6မှာပိုပြီးအသေးစိတ်တွင်ဤကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမေးခွန်းစဉ်းစားမည်နှင့်ဗန်က de Rijt ၏နောကျဆကျတှဲ၌သူတို့ကိုတစ်ဦးမြတ်သောဆွေးနွေးမှုလည်းရှိ၏ (2014) ။ ရှိပြီးသား system ထဲမှာအလုပ်လုပ်အတူပါလာသော trade-off တိုင်းစီမံကိနျးအတှကျစံပြမဟုတ်, ထိုအကြောင်းပြချက်အချို့သုတေသီများက၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စမ်​​းသပ်စနစ်, နောက်လာမည့်အပိုင်း၏ခေါင်းစဉ်ကိုတည်ဆောက်စေ။
စားပွဲတင် 4.2: ရှိပြီးသားစနစ်တွေအတွက်စမ်းသပ်ချက်၏ဥပမာများ။ ဤရွေ့ကားစမ်းသပ်ချက်သုံးအဓိကအမျိုးအစားထဲသို့ကျဟန်, ဤအမျိုးအစားသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနအတွက်နောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းများကိုသတိထားမိမှာကိုကူညီလိမ့်မည်။ ပထမဦးစွာတစ်ခုခု (ဥပမာ, ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူပါဝင်ကြောင်းစမ်းသပ်ချက်ရှိပါတယ် Doleac and Stein (2013) ) ။ ဒုတိယအချက်မှာတိကျတဲ့သင်တန်းသားများကို (ဥပမာ, တစ်ဦးကိုကုသပို့ဆောင်ပါဝင်ကြောင်းစမ်းသပ်ချက်ရှိပါတယ် Restivo and Rijt (2012) ) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီလိုအသနားခံ (ဥပမာ, အဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်တ္ထုမှကုသပို့ဆောင်ပါဝင်ကြောင်းစမ်းသပ်ချက်ရှိပါတယ် Vaillant et al. (2015) ) ။
ဝီကီ​​ပီးဒီးယားမှပံ့ပိုးမှုများအပေါ် barnstars ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Restivo and Rijt (2012) ; Restivo and Rijt (2014) ; Rijt et al. (2014)
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှာ tweet အပေါ်ဆန့်ကျင်နှောင့်ယှက်သတင်းစကားများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Munger (2016)
ရောင်းချခြင်းစျေးနှုန်းအပေါ်လေလံပွဲနည်းလမ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Lucking-Reiley (1999)
iPod ရောင်းရငွေအပေါ်ရောင်းချသူ၏မျိုးနွယ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Doleac and Stein (2013)
Kickstarter ကအပေါ်စီမံကိန်းများအောင်မြင်မှုအပေါ်အလှူငွေများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Rijt et al. (2014)
အသနားခံ၏အောင်မြင်မှုကိုအပေါ်လက်မှတ်ပေါင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Vaillant et al. (2015) ; Rijt et al. (2014)